Nofeembar 2021 – Talooyin Cheats Android
Monthly Archives: Nofeembar 2021
The 2021 Beddelka Ciyaarta ugu Fiican ee Google Play gudaha Hong Kong, Macau iyo Taiwan, Ciyaarta mobaylada ee bilaa-fudud ee-mawduuca-maahmaah-maah-maaheedka ugu horreeya abid, Sawirka khiyaaliga ah ayaa u yimid qaab ahaan! Halkan, waxaad noqon doontaa maandooriyaha’ sayid, oo ay la kulmaan tacabur cajiib ah adduunkooda yar. MUUQAALAHA CIYAARTA 3D SHEEKO GAABAN OO LA YAREEYAY Bandhiga Jirka Ku Salaysan (PBR) tignoolajiyadu waxay soo celisaa inch kasta… Akhri wax dheeraad ah »
Ka soo sameeyayaasha Rocket League, kubbada cagta baabuurta ayaa dib loogu habeeyay aaladaha mobilada! La gal ciyaarta kontaroolada taabashada dareenka leh. Way fududahay sida inaad kubbadda geliso shabagga kaa soo horjeeda, laakiin iska ilaali! Qofka kaa soo horjeeda wuxuu isku dayi doonaa inuu sidoo kale dhaliyo. Ku dhufo kor u qaadistaada si aad dhaqso ugu socoto, ama isticmaal si aad u hesho… Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Horyaal, Gantaal, Sideswipe
Ma maqashay fardaha Wildshade? Ku tarbi faraskaaga riyada leh 40 malyan doorasho, u diyaari faras kasta taako u dhigma, oo caddeyso inaad u qalanto halyeeyga Wildshade. Ku guulayso tartanka fardaha sixirka ee cajiibka ah, adduunyo tacabur leh! Hore, sanadkiiba mar meel u dhow tuulada Wildshade, wax sixir ah ayaa qaatay... Akhri wax dheeraad ah »
Fiican! You’ve found an addictive classic bubble ciyaarta toogashada.《Bubble Breaker-Aim To Win》 waa ciyaar si degdeg ah meesha uga saari karta welwelkaaga. Dabo dhammaan kubbadaha midabka leh oo ku dhufo bartilmaameedka si aad u dhammaystirto heerka! Way fududahay in la ciyaaro laakiin way adag tahay in la barto. Ka adkaato boqolaal heerar si aad uga aargoosato kartidaada. Qaabka soo cusboonaysiinta iyo caadiga ah… Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: BreakerAim, Bubble, CheatsHack, WIN
Ku soo dhawoow huggy wuggy poppy playtime waa ciyaar xiiso leh oo naxdin leh halkaas oo aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso animatronics ee cadhooday waa inay sii noolaadaan halxiraalaha naxdinta leh. Astaamaha:– Sawirro 3D yaab leh– Xakamaynta mobilada tayada leh– Naxdinta badbaadada ayaa meel walba ku gabbanaysa– Khariidad si aad u qorsheysato dhaqaaqaada xigta– Cutubyo badan iyo mods– Fudud in la ciyaaro wakhtiga ciyaarta poppy… Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, ciyaar, Huggy, Ciyaar, Waqtiga ciyaarta, Poppy, Wuggy
Sheekadu waxay ku saabsan tahay mas lumay oo bilaabay safarkiisa si uu u helo qoyskiisa waxyaabo badan oo wanaagsan oo xiiso leh safarkan. Socdaalkii, waxaad ciyaari doontaa sidii abeeso si aad wax u xado oo aad wax u rogto laakiin ka digtoonow waxyaabaha halista ah ha taabanin haddii kale waad… Akhri wax dheeraad ah »
Halxiraalaha wareegga nasashada ee Circle Relax wuxuu keenaa halxiraalaha slide-ga caadiga ah oo fudud oo qabatimo. Taabo ama simbiriirixa tiles si aad u xalliso halxiraalaha. Ku ciyaar adiga oo isticmaalaya sawirka jasiiradda kulaalayaasha ee quruxda badan ee la dhisay, ama samee xujooyin aan xadidnayn. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u dhamaystiri karto ciyaarta? Sifooyinka nasashada Circle:• Saacadaha ciyaarta oo dhaqaajiya xisaabaadka xisaabaadka si loo cabbiro horumarka xirfadda. Akhri wax dheeraad ah »
Ciyaar nooca ciyaarta cabsida iyo xujada ciyaarta wakhtiga poppy 2, waa tacabur xiiso leh, madadaalo badan. Qaybta mabda'a ee wakhtiga ciyaarta Poppy ee caanka ah. Ciyaarta wakhtiga ciyaarta poppy-ga ee cajiibka ah waa inaad sii noolaataa oo aad ka adkaataa wuggy huggy ah. Iyada oo leh meelo badan oo laga heli karo gudaha wakhtiga ciyaarta poppy, Suurtagalnimada gabi ahaanba waa bilaa dhamaad!Tilmaamo yaab leh!1- Neefsashada… Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Huggy, Waqtiga ciyaarta, Poppy, Wuggy
"Sida aan ka filanay Handelabra, nooca dhijitaalka ah waa mid aan cillad lahayn." – David Neumann, StatelyPlay.com "Hal Deck Dungeon wuxuu bixiyaa qani ah gameplay istiraatiiji ah." – Christian Valentin, AppSpy.com "Gurguurte god qoto dheer oo yaab leh leh oo leh go'aamo muhim ah oo la sameeyo mar kasta." – PixelatedCardboard.com ================================ Wicitaannada tamashlaha… laakiin had iyo jeer ma haysatid waqti aad ku... Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Deck, Dungeon
Sharaxaada Nuxurka:Tani waa ciyaar dhexmarta horyaalka iyo kooxda heysata horyaalka, iyo tartanka adag ee tennis-ka miiska ayaa bilaabmi doona.Waxaad tahay ciyaaryahan aad u fiican oo hore u soo galay tartanka ping-pong.,meeshan,Waxaad la ciyaari doontaa oo aad la dagaallami doontaa ciyaartoyda kale ee kubbadda miiska ee heer sare ah. Tartanku wuxuu qaadanayaa nidaamka knockout, waxaana jira laba-geesood… Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: Dagaal, CheatsHack, Table, Tennis